​गोविन्द केसीलाई बयानपश्चात अस्पताल लगियो, सुनुवाई भोलि
काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको बयान सकिएको छ ।
मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. केसीसँग अदालत प्रशासनले बयान लिएको थियो । मुद्दामाथि बुधबार (भोलि) देखिमात्रै बहस सुरु हुने भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण खाँडले अहिले सामूहिक नेतृत्वमा चलेको....
काठमाडौं र देशका केही सीमित सहरबाट मात्र....
​रामशरण र गगनलाई बम हान्ने तामाङ समातिए
नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरि बम हानेको आरोपमा लिखु गाउँपािलका–६, थानापतीका राजीव तामाङ पक्राउ परेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं १ का कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महत र प्रदेश नंं ‘ख’ का उम्मेदवार रमेश महत र कांग्रेसका उम्मेदवार....
​डा.केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन
काठमाण्डौं । अदालतको अवहेलनामा गरेको आरोपमा सोमबार राति पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा केसीलाई पेश गर्दै गर्दा माइतीघरमा उनका समर्थकहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा लगायतका....
​पक्राउपछि प्रहरी वृतमै अनशन बसे डा. केसी, ९ बजे अदालतमा उपस्थिती
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनामा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसी सिंहदरबार प्रहरी वृतमै अनशन बसेका छन् । उनले आफुलाई पक्राउ गरेर जहाँ लगे पनि अनशन नछाड्ने बताएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन थालेका केसीलाई सोमबार बेलुका प्रहरील....
लाइसेन्स प्रक्रिया जटिल र सकसपूर्ण भएको भन्दै अव प्रदेश सरकारमातहत रहने....
आइतबार दुई दलका शीर्ष....
​कार्यकर्तालाई जथाभावी नबोल्न एमालेको निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चलिरहेको एकता प्रक्रियाबारे जथाभावी नबोल्न नेकपा एमालेले कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको बिषयमा कार्यकर्तामाझ सार्वजनिक बहसमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।< p>
​सर्वोच्चको पक्राउ आदेशपछि गोविन्द केसीले यसो भने
काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले मान नै नभएको अदालतको पक्राउ पुर्जी आफूले नमान्ने प्रतिकृया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केसीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो प्रतिकृया दिने गरेका छन् । उनले गोपाल पराजुलीका गलत कुरा बाहिर ल्याउँदा अदालतको मानहानीको....